किन कसैको आँखा पुग्न सकेन, आजादको जन्मघरमा ? « Pahilo News
किन कसैको आँखा पुग्न सकेन, आजादको जन्मघरमा ?
प्रकाशित मिति :4December, 2016 11:53 am
१९ मंसिर । अचेल खुर्कोट बजारको व्यस्तता निकै बढेको छ । काठमाडौंबाट पूर्वतिर जाने सवारी साधनहरुको चापले सुनकोसी नदीको किनारमा उभिएको सहरोन्मुख खुर्कोट बजारको व्यस्तता बढ्नु स्वाभाविकै हो । अझ, मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका दस नयाँ सहर बनाउने÷बसाल्ने योजनाभित्र खुर्कोट पनि परेको हुँदा यो सानो पहाडी बजार विस्तारै चम्किन थालेको छ ।
बीपी मार्गको खुर्कोट बजारबाट उत्तरतिरको सानो बस्तीतिर आँखा लगाउँदा एउटा थोरै भत्किएको र चर्किएको पुरानो घर देखिन्छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो घरको इतिहास । तर, त्यही घरमा जन्मिएका थिए, क्रान्ति–नायक ऋषिराज देवकोटा ‘आजाद’ । त्यही खुर्कोटबाटै आजादले देशबाट राजतन्त्र हटाएर समाजवादी राज्यसत्ता ल्याउने सपना देखेका थिए र सोही अभियानकै क्रममा २०३७ सालमा भीमानको जंगलमा तत्कालीन शासकद्वारा उनको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । उनले देखेको सपना आंशिक पूरा भएको छ र देशमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।
तर, आज तिनै क्रान्ति–नायक, स्वप्नदर्शी नेता आजाद जन्मिएको घर भत्किने र ढल्ने स्थितिमा पुग्दा पनि कसैको नजर पर्न सकेको छैन । हुन त, अहिले उक्त घर अर्कै व्यक्तिको स्वामित्वमा छ । तर, आजाद जन्मिएको घर हेर्न चाहने आगामी पुस्ताका निम्ति भने अब त्यो घर इतिहास बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
खुर्कोटमै सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा समाजसेवी चक्रबहादुर श्रेष्ठले एक दिन आजादको घरको दुरावस्थालाई तस्बिरमा उतारे । आजादको घरलाई तस्बिरमा उतारेपछि उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘भूकम्पले गर्दा आजादको घर भत्किनै लागेको छ । यसलाई संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर, कसैले पनि चासो दिइरहेका छैनन् ।’ २००० सालमा खुर्कोटमा जन्मिएका आजादले २७ वर्षसम्म त्यही घरमा बिताएका थिए । तर, २०२७ सालमा भीमानमा बसाइँ सरेपछि स्थानीय रामजी देवकोटाले किनेका थिए, त्यो घर ।
चौथो महाधिवेशनमा विद्रोह गरेर तत्कालीन नेकपा (माले) सँग पार्टी एकता गर्ने तयारीमै जुटिरहेका बेला आजादको हत्या गरिएको थियो । तर, उनलाई एमालेले मात्र होइन, अरु कम्युनिष्ट घटकहरुले पनि आदर्शवान् र क्रान्तिकारी नेता मान्दै आएका छन् । नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का नेता हरिबोल गजुरेलले पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषि विकास मन्त्रालय सम्हाल्दा खुर्कोट पुगेर आजाद जन्मिएको घर खरिद गर्नेबारे कुरा उप्काएका थिए । तर, राज्यले नै पहल नगरी सो घर खरिद गर्न नसकिने देखिएको छ ।
आजाद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा आफूहरुको त्यो घरसँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताउँछन् । देवकोटाले भने, ‘त्यो ऐतिहासिक घर हो । तर, अहिले प्रतिष्ठानले खरिद गर्नसक्ने स्थिति छैन । राज्यले पहल नगरी त्यो घर खरिद गर्न सकिँदैन ।’ तर, कुनै बेला प्रतिष्ठानले रकम जुटाउन सकेको खण्डमा खरिद गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको उनले बताए ।